China Double တဖက်သတ်နဲ့ Led အလင်း China Manufacturers & Suppliers & Factory
Double တဖက်သတ်နဲ့ Led အလင်း - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Double တဖက်သတ်နဲ့ Led အလင်း ထုတ်ကုန်များ)
ဥယျာဉ်မီးခွက်များတီထွင်ပြီးကတည်းကကွဲပြားခြားနားသောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဒီဇိုင်းပုံစံများအရကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုဥရောပဥယျာဉ်မီးခွက်များ၊ ခေတ်သစ်ဥယျာဉ်မီးခွက်များနှင့်ဂန္ထဝင်ဥယျာဉ်မီးခွက်များအရအမျိုးအစားခွဲခြားသည်။...
ပန်းခြံများ၊ ဥယျာဉ်များ၊ ဥယျာဉ်များ၊ စိမ်းလန်းသောခါးပတ်များ၊ စတုရန်းအလင်းရောင်နှင့်အလင်းရောင်အလှဆင်ခြင်းတို့တွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ပန်းခြံများနှင့်အများပြည်သူလောင်းကစားရုံများပိုမိုများပြားလာသည်။ လူတို့အားသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ် ၀...
ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင် polyester ပလပ်စတစ်မှုန့် electrostatic ပက်ဖြန်းခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ခြင်း၊ သံမဏိချိတ်ဆက်မှုများ၊ ခွန်အားမြင့်မားခြင်း၊ ခိုင်ခံ့သောတိုက်စားမှုစွမ်းရည်မရှိခြင်း၊ power drive မရှိခြင်း၊ ရွေးချယ်နိုင်သောအရောင်၊ ၎င်း၏တိုင်တိုင်၏တောက်ပသောအရောင်သည်အရောင်ပြောင်းနိုင်သည်။...
ဤဥယျာဉ်မီးခွက်၏အပြင်ပန်းဒီဇိုင်းကိုအချစ်နှင့်တက်ကြွမှုကိုကိုယ်စားပြုသည့်ပန်းပွင့်များကမှုတ်သွင်းထားသည်။ ဝင်းဝင်းမီးအိမ်တွေဟာသာယာလှပတဲ့အစက်အပြောက်တွေနဲ့အဆင့်မြင့်လူနေအိမ်decorရိယာတွေကိုအလှဆင်ဖို့အတွက်လူတွေကိုလှပတဲ့တန်ဖိုးထားမှုကိုပေးရုံတင်မကဘဲအသုံးပြုကြသည်။ ညမှာလည်းတောက်ပတဲ့မီးတွေရှိတယ်။ အလင်းအရင်းအမြစ်သည် LED ဖြစ်သည်။...
ဤလမ်းမီးတိုင်များ၏အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ လှံတံကိုယ်ထည်ကိုလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလှိုင်းကိုယ်ထည်၏မျက်နှာပြင်ကိုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပြည့်စုံစွာပြုလုပ်ထားပြီးလမ်းမီး၏သက်တမ်းကိုတိုးစေသည်။ အထွေထွေလမ်းမီးခွက်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်သည် LED...
တရုတ်စတိုင်မီးအိမ်အများအပြားအလင်းရင်းမြစ်များရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ illumination နှင့်ကောင်းမွန်သောရှုခင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, ကျေးဇူးတော်နှင့်ယဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရာကိုယ်စားလှယ်စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ acrylic အဖုံး PC အတွက်မီးဖိုသို့မဟုတ် PNNA အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကိုတင်သွင်းသည်။ အလူမီနီယမ် (သို့)...
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို 1) ဆီမီးခွက် post ကိုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းများ၏ပစ္စည်း: 6063-T5 က The ပြင်မျက်နှာပြင်ကိုသဘာဝအရောင်အားဖြင့်ဓါတ်တိုးနေသည်။ 2) Converter အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ parameters: ကိုမရရှိနိုင် မြေတပြင်လုံးဆီမီး 3) အလင်းအား flux: 120LM / W ကို 4) ချစ်ပ်အမှတ်တံဆိပ်: Bdo, 200W .24V:...
Cue - shaped ဥယျာဉ်အလင်း
ထုတ်ကုန် polyester အမှုန့် electrostatic ပက်ဖြန်း, ခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှု, သံမဏိ connector ကိုမြင့်မားခွန်အားကိုချေးခုခံ, တန်ခိုးမရှိ drive ကို, အရောင်ရွေးချယ်နိုင်, မူပိုင်ခွင့်တောက်ပဆီမီးခွက်၏မျက်နှာပြင်။ ယင်း၏ဆီမီးခွက်ဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့တောက်ပတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်း၏ဆီမီးခွက်တိုင်အမြင့်...
Double တဖက်သတ်နဲ့ Led အလင်း double-တဖက်သတ်နဲ့ LED အလင်း အမြင့်ပါဝါနဲ့ LED လမ်းအလင်း High Quality လူမီနီယမ်နဲ့ LED လမ်းအလင်း နေရောင်ခြည်နဲ့ LED လမ်းမီး အမြင့်ပါဝါနဲ့ LED လမ်းမီး အတုကျောက်ခေတ်ဥယျာဉ်အလင်း အမြင့်ရွက်တိုင်အလင်း
Double တဖက်သတ်နဲ့ Led အလင်း double-တဖက်သတ်နဲ့ LED အလင်း အမြင့်ပါဝါနဲ့ LED လမ်းအလင်း High Quality လူမီနီယမ်နဲ့ LED လမ်းအလင်း နေရောင်ခြည်နဲ့ LED လမ်းမီး